Kuuraya Kujekesa - Avhareji Inoshanda Inopararira | FXCC
musha / Trading / Kuuraya Kujekesa / Avhareji Inobudirira Inopararira
Avhareji Inoshanda Inopararira yekuurawa
Transparency ibwe rekona rebasa ratiri kupa, iko kuvhurika kunowedzera kune zvese zvatinoita.
Takazvipira kwazvo pakubudirira kwako isu tinopa maturusi mazhinji ayo vatinokwikwidza vatengesi.
Yedu yepakati yekuparadzira chishandiso inoratidza vatengi vedu 'chaiyo saizi yekupararira pamusoro pezvazvino zvikamu. Iwe unogona kushandisa inodonhedza menyu kuti usarudze iko iko iko iwe kwaungade kuongorora. Y-axis inoratidza kupararira, iyo X-axis iyo nguva.
Iyo yekudhirowa mutsara inoratidzira kupararira kunowanikwa pane imwe nguva, uye iwe unoona iyo 15-maminetsi avhareji kuyerwa kukosha kwekupararira. Iwe unogona kukurumidza kuona spikes uye nguva dzekuwedzera kusagadzikana, pamwe pakaitika chiitiko chakakosha chenhau.
Kupararira ndiwo musiyano uripo pakati pekutenga nekutengesa (bhidha uye kupa) mitengo yezviridzwa zvemari. Kune mhando mbiri dzekupararira: dzakagadziriswa uye dzinoyangarara. Kwakagadziriswa kupararira hakushanduke zvinoenderana nemusika wezuva mamiriro uye nguva. Kupararira kwekuyerera kuchachinja zvinoenderana nezvinhu zviviri izvi. Kupararira kwekuyangarara kunoratidzwa kuve kwakanyanya kudhura sezvo vatengesi vanowana wakanakisa musika mutengo chero nguva yakapihwa mumusika. Fixed spreads ichava nechinhu cheinishuwarenzi chakawedzerwa kune iyo quote nekuti broker anogona kunge achifanira kuvharira kuratidzwa kwavo.Read more
Kuverenga iyo chati chati
Iwe unogona kusarudza mapfupi kana akawedzeredzwa nguva nekudzvanya pane zoom ficha iri pane iyo chati kurudyi-kona. Kana iwe ukamira pamusoro pemasekete, iwe unogona kuona iyo nguva apo kuwedzera kwekushanduka kwemusika kwakonzera kuti kupararira kusimuke. Iko kuwedzera kwekupararira kunogona kuve nekuda kwekutyora nhau, dhata kuburitswa kana chiitiko chemacroeconomic.